Ịga Kildare - IntoKildare
Banye na Kildare
Ịga Kildare agaghị adị mfe ma ọ bụ mee ngwa ngwa site na njikọ njikọ njem dị iche iche ịhọrọ. Ozugbo ị bịara ebe a, anyị na -akwado ka ị jiri ụgbọ ala ma ọ bụ njem nlegharị anya nyocha akụkụ niile. Ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọdụ ala, ụgbọ okporo ígwè na ụgbọ ala na -agakarị ga -akpọga gị n'obodo ukwu na obodo nta.
Ebee ka Kildare dị?
Ị maghị ọdịdị ala Irish? County Kildare dị n'ụsọ oké osimiri ọwụwa anyanwụ nke Ireland na nsọtụ Dublin. Ọ dịkwa n'ókèala Wicklow, Laois, Offaly, Meath na Carlow nke mere n'ezie na Ọwụwa Anyanwụ Ireland.
Obodo mepere emepe, obodo na -adịghị mma, ime obodo na -agbagharị agbagharị na ọmarịcha ụzọ mmiri, Kildare bụ ebe kachasị mma ịnụ ụtọ ndụ ime obodo Irish yana ọrụ nke nnukwu obodo.
N'inwe ọtụtụ ụzọ ịhọrọ, Ireland na Kildare na -enweta ikuku n'ụzọ dị mfe. Enwere ọdụ ụgbọ elu mba ụwa anọ dị na Ireland - Dublin, Cork, Ireland West & Shannon - yana njikọ ụgbọ elu kpọmkwem site na US, Canada, Middle East, UK na Europe.
Ọdụ ụgbọ elu kacha nso na County Kildare bụ ọdụ ụgbọ elu Dublin. Maka usoro ụgbọ elu na nleta ozi ndị ọzọ dublinairport.com
Mgbe ị bịarutere, ị nwere ike gbaa ụgbọ oloko, bọs ma ọ bụ were ụgbọ ala. Netwọkị okporo ụzọ ga -ahụ gị na Kildare obere oge!
Ịkwọ ụgbọ ala bụ nnukwu ụzọ iji chọpụta akụkụ niile nke Kildare. Kildare nwere njikọ na isi obodo niile site n'okporo ụzọ pụtara obere oge eji eme njem na oge maka ịgagharị!
Ọ bụrụ na ịchọghị iweta wiilị nke gị, enwere nhọrọ nke ụlọ ọrụ na -akwụ ụgwọ ụgbọ ala nke mba ụwa niile ga -ahọrọ ịhọrọ gụnyere Hertz na echiche yana Dan Dooley, Europcar na Enterprise. Maka ụgwọ ọrụ dị mkpụmkpụ, ọrụ ịkekọrịta ụgbọ ala dịka Gaa ụgbọ ala na -enye ọnụego kwa ụbọchị na elekere. A na-enweta ego ụgbọ ala site na ọdụ ụgbọ elu na obodo niile-cheta na ịnya ụgbọ ala na Ireland dị n'akụkụ aka ekpe nke okporo ụzọ!
Site na ọdụ ụgbọ elu Dublin, M50 na M4 ma ọ bụ M7 ruru Kildare erughị otu awa, ebe n'ime naanị awa abụọ site na Cork (site na M8) ma ọ bụ ọdụ ụgbọ elu Shannon (site na M7) ị nwere ike nọrọ n'obi Kildare.
Iji hazie njem gị tupu oge eruo, gaa www.aaireland.ie maka ụzọ kacha mma na igodo a pụrụ ịdabere na ya.
Nọdụ ala, zuru ike ma hapụ onye ọzọ ka ọ na -anya ụgbọ ala. Eurolines na -arụ ọrụ ugboro ugboro site na Europe na Great Britain. N'otu oge na Ireland, Gaba n'ihu, JJ Kavanagh na Onye nkuzi Dublin ga -akpọga gị Kildare site na etiti obodo Dublin, ọdụ ụgbọ elu Dublin, Cork, Killarney, Kilkenny, Limerick na gburugburu Kildare.
Irish Rail na -arụ ọrụ ụgbọ oloko kwa ụbọchị na -aga na site na nnukwu obodo, gụnyere Cork, Galway, Dublin na Waterford. Jiri ụgbọ oloko si na Dublin Connolly ma ọ bụ Heuston gaa Kildare n'ime nkeji iri atọ na ise.
Akwadoro ịdebe akwụkwọ n'ihu n'ihi na ọrụ nwere ike ịnọ n'ọrụ. Nleta Ụgbọ okporo ígwè Irish maka usoro iheomume zuru oke yana akwụkwọ.
Site na ụgbọ mmiri
Enwere nhọrọ nke aga -esi na Great Britain, France na Spain na -arụ ọrụ Fergbọ mmiri Irish, Ụgbọ mmiri Brittany na Nweta Stena.
Site na Rosslare Europort na Cork Port, enwere ike ịnweta njem ezumike gị n'ihe dị ka awa abụọ n'ụgbọ ala. Dublin Port nwere njikọ nke ọma, ọ ga -ejikwa ụgbọ ala, ụgbọ ala ma ọ bụ ụgbọ oloko rute Kildare.
Njikọ Njem bara uru
Site na Ikuku